အလွန်ခက်ခဲပြီးစိတ်ပျက်စရာကိစ္စများအတွက် Saint Jude Thaddeus သို့ဆုတောင်းပါ။ ?
ဆုတောင်းခြင်း စိန့်ယုဒသဒပ် အလွန်ခက်ခဲများနှင့်အပူတပြင်းဖြစ်ပွားမှုသည် လူတစ် ဦး ၏တောင်းဆိုချက်အားလုံးတို့တွင်အခြားသူများထက် ပို၍ ခက်ခဲသောကိစ္စများရှိသည်။ ဤသူတို့အဘို့ဤအစွမ်းထက်ဆုတောင်းပဌနာသည်။
ဤတွင်ရိုးရှင်းသော (သို့) တန်ဖိုးမရှိသောအရာများကိုမတောင်းခံနိုင်ပါ။ ဥပမာ၊ ဤဆုတောင်းခြင်းသည်အထူးသဖြင့်အံ့ဖွယ်ကုသမှုကဲ့သို့မဖြစ်နိုင်သည့်အရာများအတွက်ဖြစ်သည်။
ပျောက်ဆုံးနေသူ၊ ကလေးများနှင့်လူကြီးများရှိပါက San Judas Tadeo အားအိမ်သို့ပြန်ရန်လမ်းမေးသည်။
1 အလွန်ခက်ခဲပြီးအပူတပြင်းဖြစ်ရပ်များအတွက် Saint Judas Tadeo ထံဆုတောင်းပါ။ သူကဘယ်သူလဲ။
2 အလွန်ခက်ခဲပြီးအပူတပြင်းဖြစ်ရပ်များအတွက် St. Jude Thaddeus ထံဆုတောင်းပါ
4 ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်း St. Jude Thaddeus?
အလွန်ခက်ခဲပြီးအပူတပြင်းဖြစ်ရပ်များအတွက် Saint Judas Tadeo ထံဆုတောင်းပါ။ သူကဘယ်သူလဲ။
သူသည်တကျိပ်နှစ်ပါးအဝင်တစ် ဦး အနေဖြင့်မြေကြီးပေါ်ရှိစဉ်ကလူသား၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီသခင်ဘုရားနှင့်ရင်းနှီးခဲ့သည်။
Judas Tadeo တွင်မည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုဖော်ပြထားသောတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များစွာမရှိပါ။
သူသည်ယနေ့သူတော်စင်အဖြစ်အများဆုံးသတ်မှတ်ခံထားရသောကြောင့်သူ၏သမိုင်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်သိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
သူ၏အံ့ဖွယ်စွမ်းအားသည်သူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြားရှိကြားခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကောင်းကင်ဘုံရှိပလ္လင်တော်ရှေ့တွင်တောင်းဆိုမှုများသည် ပို၍ အရေးကြီးသည်ဟုယူမှတ်ကြသည်။ ဤအကြောင်းပြချက်သည်မည်မျှခက်ခဲသည်ဖြစ်စေ၊ ခက်ခဲသည်ဖြစ်စေ၎င်းတို့အားပိုမိုမြန်ဆန်စွာဖြေကြားခြင်းဖြစ်သည်။ အတွက် ဆုတောင်းပဌနာ.
အိုးမြတ်သောတမန်တော်စိန့်ယုဒ! ယေရှု၏သစ္စာရှိကျေးကျွန်နှင့်မိတ်ဆွေ။ သင်ချစ်မြတ်နိုးရသောသခင်ကိုရန်သူလက်သို့အပ်နှံခဲ့သောသစ္စာဖောက်၏အမည်မှာလူများစွာသည်သင့်ကိုမေ့သွားသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည် သို့သော်ချာ့ချ်ကသင့်အားတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်သင့်အားခက်ခဲပြီးအပူတပြင်းဖြစ်ပွားစေသည့်ကိစ္စရပ်များအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသူအဖြစ်ချီးမြှင့်သည်။
အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏လိုအပ်ချက်များ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခများ၌ကောင်းကင်ဘုံ၏နှစ်သိမ့်မှုနှင့်အကူအညီကိုကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင် မှစ၍ ရွေးကောက်တော်မူသောသူအပေါင်းတို့နှင့်တကွ၊
မြင့်မြတ်သော Saint Jude၊ ဤကြီးမားလှသောမျက်နှာသာကိုအစဉ်သတိရရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ကတိပြုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားအထူးနှင့်အစွမ်းထက်သောကာကွယ်သူအဖြစ်ဂုဏ်ပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးသင်၏ဆည်းကပ်ဝတ်ပြုမှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။
ထိုကဲ့သို့သောကင်ဆာ, ဝမ်းနည်းဖွယ်မတော်တဆမှု, ပျောက်ဆုံးနေပုဂ္ဂိုလ်များ, ပြန်ပေးဆွဲခြင်း, လုယက်မှုများနှင့်ခက်ခဲထည့်သွင်းစဉ်းစားအားလုံးတောင်းဆိုမှုများအားလုံးအဖြစ် Terminal ရောဂါများဤသူတော်စင်မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်သောဖြစ်ကြသည်။
သင်ရရှိလိုသောအရာကိုတိတိကျကျမေးမြန်းရမည်။ ဤကိစ္စကိုသင်ကောင်းစွာသိသင့်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုကုသပေးရန်မတောင်းဆိုနိုင်ပါ။ အထူးသဖြင့်ထိုသူ၏အမည်နှင့်ရောဂါအမည်ကို အသုံးပြု၍ အထူးဆုတောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ။
ပျောက်ဆုံးရသည့်အကြောင်းရင်းများတွင်အထူးကု၊ လူများယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့။ မျှော်လင့်ချက်မရှိသောနေရာများတွင်ဖြစ်သည်။
အလွန်ခက်ခဲပြီးအပူတပြင်းဖြစ်ရပ်များအတွက် St. Jude Thaddeus ထံဆုတောင်းခြင်းသည်အင်အားကြီးမားသည်။
စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်း အရာခပ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအရာများ၌ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီရန်အစွမ်းတန်ခိုးရှိပြီးသူ၏အောင်မြင်ရန်ကူညီပေးရန်ကိုယ်တော်၏သန့်ရှင်းသူများလည်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းဆုတောင်းရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်း St. Jude Thaddeus?
St. Yude Thaddeus ထံသင်ဆုတောင်းသည့်အခါတိုင်းအလွန်ခက်ခဲပြီးအပူတပြင်းဖြစ်ရပ်များအတွက်ဆုတောင်းနိုင်သည်။
ဤစွမ်းအားကြီးသောသူတော်စင်သည်သင်၏တောင်းဆိုချက်အားလုံးကိုနားထောင်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်နှလုံးသားထဲ၌ ၀ င်ရန်လုံလောက်သည်။
အချိန်ရှိရင် San Judas Tadeo ကိုဖယောင်းတိုင်ထွန်းပေးဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။